अर्को माओवादी जन्माउने प्रचण्डको धम्कीले बालुवाटारमा खैलाबैला, के गर्लान अब ओली ?-Nepali online news portal
अर्को माओवादी जन्माउने प्रचण्डको धम्कीले बालुवाटारमा खैलाबैला, के गर्लान अब ओली ?
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई केही बुँदाहरुमा चेतावनी मूलक असन्तुष्टि पोखे ।
पार्टी एकीकरणको घोषणा पछि अझै समेत पूर्ण रुपमा पार्टी एकता हुन नसकेको यो पार्टी भित्र अझै पनि एकता गर्न बनेको कार्यदलले समय थप गर्न माग गरिरहेको छ । यसको अर्थ यहाँ मूलभूत अन्तर्वस्तुमा नै यो पार्टी भित्र समझदारी हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय भेनेजुयला प्रकरणमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको कुरा बाझिएको मात्रै छैन । उनीहरुबीच एकले अर्काेलाई गलत नै सावित गर्ने प्रयासमा समेत उनीहरु उत्रिएका छन् । यसमा सिधा रुपमा हेर्दा प्रचण्डले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई फसाउने प्रपञ्च रचेको त होईन ? भन्ने सन्देश समेत जान थालेको छ ।
भेजेजुयला प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डको धारणामा जिब्रो चिप्लिएको भन्दै बचाउनमा उत्रिएका छन् भने प्रचण्डले जिब्रो चिप्लिएको नभई पार्टीको धारणा नै यही रहेको बताउँदै आएका छन् । यो विषयमा धेरैलाई दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धबारे शंका मात्रै भएको भएपनि प्रचण्डको शुक्रबारको झण्डै १० मिनेटको भाषणले भने उनीहरुबीचको बैमनस्यतालाई छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
प्रचण्डले अर्को माओवादी जन्माउन सकिने चेतावनी दिईरहँदा उनको संकेत अर्को गृह युद्धको थियो । नेकपा स्रोतका अनुसार पार्टी भित्र आफ्नो पक्षलाई सम्मानजनक हैसियत नदिइएको र राजनीतिक नियुक्तिमा समेत प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पक्षीयलाई मात्रै भर्ति गर्न थालेपछि अहिले प्रचण्ड पनि केपी ओली प्रति सशंकित मात्रै होईन आक्रोशित समेत देखिएका छन् ।
त्यसो त बाहिर देख्नको लागि यस अघि राम्रोसँग मिलेको देखिएपनि सरकारको जनविरोधि कामलाई बाहिर चर्चामा ल्याउनको लागि प्रतिपक्षी दलको भन्दा पनि धेरै सत्तारुढ तत्कालीन माओवादी पक्षीय नेताहरुकै सहभागिता बढी देखिन्छ । माओवादी पक्षीय नेताहरुले एशिया प्यासिफिक समिट भन्दा पहिलेदेखि नै सरकारले गरेका नराम्रा कामहरुमा आफू सुरक्षित खेमामा बसेर तत्कालीन नेकपा खेमाका नेताहरुलाई मात्रै त्यो काण्डमा सहभागि गराउने कामदेखि नै पार्टी भित्रको दुई खेमाको राजनीति बाहिर आईसकेको थियो ।
एशिया प्यासिफिक समिटमा प्रचण्डको दाँत दुख्नु र चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मुद्दामा संसद्मा हंगामा हुँदा विरामी भएका प्रचण्डको रणनीतिलाई पनि त्यतिबेला नै धेरैले शंका गरेकै हुन् । प्रचण्डको यो राजनीतिको पछि केपी ओलीको दम्भ नै प्रमुख कारण रहेको भनाई तत्कालीन माओवादी खेमाका एक नेताले बताए । उनका अनुसार पार्टी एकीकरणदेखि नै केपी ओलीले तत्कालीन माओवादी खेमाका नेताहरुलाई विभेदकारी व्यवहार गर्दै आएका थिए । यसमा प्रचण्डले सधैं असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।
स्रोतले भन्यो प्रचण्डको यो सबै असन्तुष्टि बन्न लागेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नेतृत्वको लागि त होईन ? भन्ने आशंका समेत सुरु हुन गर्र्ने गरिएको छ । सरकारको दबाबका कारण नै बुधबार सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामासँगै नयाँ नेतृत्वमा कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा समेत नेकपा भित्र बहस सुरु हुन थालेको छ ।
अर्काे तर्फ सरकारको गृहमन्त्री नै तत्कालीन माओवादी कमाण्डर रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेका प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको आधारमा अहिले प्रहरीले भटाभट तत्कालीन लडाकूहरुलाई समात्ने काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए । प्रचण्डको यो संकेतलाई पनि गम्भीर रुपमा लिने गरिएको छ ।
के गर्लान् ओली ?
दुई तिहाईको बलियो राजसिंहासनमा बसेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलसम्म त केही पनि डर थिएन । तर, अहिले सत्तारुढ र आफ्नै दलबाट समेत अनेकानेक असन्तुष्टिहरु आउन थालेपछि भने ओली माथि समेत दबाब सुरु भएको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर, सत्तारुढ दलले नै यस्तो धम्की दिँदै गर्दा र भेनेजुयलाको विषयमा सरकारलाई अफ्टेरोमा पार्ने प्रयास गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ?
फरक विचार र फरक सिद्धान्तको आधारमा एकीकरण भएको यी दलहरुबीच यत्ति छिट्टै दरार सिर्जना हुनुले राम्रो संकेत भने दिँदैन । यसलाई ओलीले सकारात्मक अवतरण गर्ने आशा आम नेकपा कार्यकर्ताको देखिन्छ ।